Tọghata iPhone Messageto PC
M chọrọ ịzọpụta iMessage akụkọ ihe mere eme gụnyere Mgbakwụnye na m iPhone na kọmputa, nke mere na m nwere ike iṅomi ma ọ bụ zipu m ya Email. Ọ ga-ekwe omume? M na-eji iPhone 4, iOS 5.0.1. Ekele :)
Ka ịzọpụta iMessage si iPhone ka PC ma ọ bụ Mac site na-eme a nseta ihuenyo nke ya? Kwụsị ya ugbu a. Oké ụzọ zọpụta iMessage on iPhone na-azọpụta ya dị ka a ogugu na editable faịlụ, ọ bụghị a foto. I nwere ike ime ya n'ihu, ma i nwere ike ime ya ugbu a. Na iMessage mbupụ ngwá ọrụ, na ọ bụ a dị mfe ọrụ.
Amaghị ebe ịchọta ihe iMessage exporting ngwá ọrụ? Nwere m abụọ na-atụ aro ebe a: na otu onye bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (Windows) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (Mac) (maka Mavericks). Na ya, i nwere ike n'ụzọ zuru ezu ike iṅomi na-azọpụta iMessages conversions si na gị iPhone 5S / 5C / 5 / 4S / 4 / 3GS, niile iPads na iPod aka 5/4. E wezụga, ma nsụgharị enyere ịhụ gị ehichapụ iMessage ọdịnaya kpọmkwem site iPhone, iPad na iPod aka. Ndị ọzọ bụ Wondershare TunesGo. Ọ na-ahapụ ị na-azọpụta iMessages na Mgbakwụnye dị ka a HTML / XML / TXT faịlụ. Dị nnọọ nwere a-agbalị ego ma ha na ihe ị chọrọ ma ọ bụ.
Ngwọta 1: Nyefee na Save iPhone SMS Ozi si iPhone ka PC ma ọ bụ Mac na TunesGo
Ngwọta 2: Naghachi na Nyefee iPhone SMS Ozi si iPhone ka PC ma ọ bụ Mac na Dr.Fone maka iOS
TunesGo na-enye gị ike iji zọpụta iMessages, MMS, SMS na ha Mgbakwụnye, dị ka music, videos na foto gị Windows kọmputa. Download ngwá ọrụ iji nwere a-agbalị.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPhone / iPod / iPad ka Windows kọmputa
Na-agba ọsọ TunesGo na Windows kọmputa mgbe nwụnye. Jiri eriri USB jikọọ gị iPhone / iPad / iPod ka Windows kọmputa. Ngwá ọrụ a ga-amata gị iPhone / iPad / iPod ngwa ngwa na ahụ na-egosi ya na isi window.
Cheta na: TunesGo arụ ọrụ zuru okè na iPhones, iPads, iPods, dị ka iPhone 5, iPad Obere na iPod aka 5 na-agba ọsọ iOS 6 na iOS 5.
Nzọụkwụ 2. Save iMessages na kọmputa
Na-ekpe sidebar. Pịa "SMS". All ederede ozi, iMessages, MMS na-gosiri na SMS window ke ziri ezi. Họrọ iMessages na ị ga-amasị ịzọpụta. Mgbe ahụ, pịa "Export ka". Na ya adaala menu, họrọ "exported All Ozi" ma ọ bụ "Export Họrọ Ozi" .Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike họrọ mbupụ iMessages na HTML faịlụ, ihe XML faịlụ ma ọ bụ a TXT faịlụ. Mgbe faịlụ nchọgharị window Pop elu, na-agagharị gị Windows PC ruo mgbe achọta gị chọrọ nchekwa maka ịzọpụta iMessages.
Download TunesGo na-agbalị otú ịzọpụta iMessages conversasions.
Download ikpe mbipute nke Dr.Fone maka iOS n'okpuru maka free:
Ọ bụrụ na ị a Windows onye ọrụ, biko ịhọrọ Windows version n'ihi na gị iPhone. Ịchekwa iPhone iMessage gị PC ma ọ bụ Mac nwere ike mere a yiri nke ahụ. Ọzọ, ka na-agbalị otú mezue ọrụ na Windows version ọnụ.
Mgbe ị na-agba ọsọ usoro ihe omume, ị ga-ahụ isi window na kọmputa gị dị ka ndị a. Mgbe ahụ jikọọ gị iPhone site eriri USB.
N'ihi na iPhone 5S / 5C / 5 / 4S, iPad na Retina ngosi, iPad Obere, The ọhụrụ iPad, iPad 2 na iPod aka 5 (na-enweghị ozi Mgbakwụnye):
N'ihi na iPhone 4 / 3GS, iPad 1 na iPod aka 4 (gụnyere ozi Mgbakwụnye): Ị nwere ike ịhọrọ Advanced Mode ịbanye a elu Doppler mode.
Nzọụkwụ 2. iṅomi iMessage na ngwaọrụ gị
Ọ bụrụ na ị na-eji iPhone 5S / 5C / 5 / 4S, iPad na Retina ngosi, iPad Obere, The ọhụrụ iPad, iPad 2 ma ọ bụ iPod aka 5, ị nwere ike ozugbo pịa Malite iṅomi na window n'elu ka iṅomi ya.
Ọ bụrụ na ị na-eji iPhone 4 / 3GS, iPad 1 ma ọ bụ iPod aka 4, gị mkpa iji tinye ngwaọrụ scanning mode. I nwere ike ime ya dị ka nkọwa na window, ma ọ bụ soro ụzọ n'okpuru:
Jide gị na ngwaọrụ, na pịa Malite na window.
Jide Ike na Home buttons na gị iPhone n'otu oge maka kpọmkwem 10 sekọnd.
Hapụ Ike bọtịnụ mgbe 10 sekọnd gafere, ma ịnọgide na-ejide ndị Home button ọzọ 15 sekọnd.
Mgbe a ozi na-ekwu na ị na banyere mode ọma Pop elu, ị nwere ike hapụ Home bọtịnụ. Mgbe ahụ na-eche maka oge, usoro ihe omume ga-akpaghị aka iṅomi gị iPhone tụlechara ya. N'oge ahụ, ị ​​ga-ahụ na windo n'okpuru.
Nzọụkwụ 3. Preview na-azọpụta iMessage akụkọ ihe mere eme ka gị na kọmputa
Doppler ga rechapụ gị a obere oge. Mgbe ya, ị ga-enweta a Doppler akụkọ dị ka gosiri na window n'okpuru. Ebe a, họrọ Ozi, na mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịhụchalụ niile ozi gị ọdịnaya, gụnyere iMessage na attachents. Akara ha na ị nwere ike ịzọpụta gị iMessages na kọmputa dị ka a HTML faịlụ. Site n'ụzọ, ị nwere ike ịga na Message Mgbakwụnye ka iche iche ịzọpụta media ọdịnaya site iMessage.
Usoro ihe omume nwere ike naputa ehichapụ data si iPhone.
N'ihi ya, ndetu ịchọta ebe a na-agụnye ndị ehichapụ-adịbeghị anya na na ugbu ẹdude na gị iPhone.
Ị nwere ike iji bọtịnụ n'elu ikewara ha: Naanị gosipụta ehichapụ ihe.
Download ikpe mbipute nke Wondershare Dr.Fone maka iOS n'okpuru maka free ugbu a:
Olee otú Zọpụta SMS si iPhone ka Mac ma ọ bụ PC
> Resource> iPhone> otú nyefee na nkwado ndabere iPhone SMS Ozi iMessage mkparịta ụka na-PC ma ọ bụ Mac